निरोगी र तन्दुरस्तका लागि के गर्ने ? – Janaubhar
निरोगी र तन्दुरस्तका लागि के गर्ने ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख १२, २०७५ | 235 Views ||
आफ्नो निश्चित उमेर बाँचुन्जेल हामी निरोगी रहन चाहन्छौं र दीर्घायु चाहन्छौं । सधै जवान र तन्दुरुस्त रहन रुचाउँछौं । तर, कसरी यस्तो जीवन पाउने ? यो हाम्रो आफ्नै हातमा छ । हामी निरोगी बाँच्ने वा स्वस्थ जीवन ? यसमा हामी स्वंय जिम्मेवार छौं । जवान रहन, तन्दुरुस्त रहन, निरोगी रहन औषधी सेवन गर्नुपर्दैन् । शल्यक्रिया गर्नु पर्दैन् । यसका लागि केवल अनुशासित जीवनशैली अपनाए पुग्छ । तर, हामी खानपान, दिन चर्यामा वेप्रवाह छौं ।
हामीलाई क्षणिक प्रलोभनले गाँजेको छ । हामी खानपानमा लापरवाही छौं । जिब्रोको स्वाद खोज्छौं । शरीरलाई ऐस,आराम खोज्छौं । मासु, मदिराको साथ छाड्दैनौं ।
हाम्रो सोच,चिन्तन पनि उन्नत खालको हुँदैन् । परिणामतः हामी रोगी, जीर्ण बन्दै जान्छौं । हामी उमेर नपुग्दै रोगको चंगुलमा फस्न पुग्छौं । अतः यस्ता संभावित दुरावस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि जीवनलाई संयमित र अनुशासित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ ।
यहाँ केही सूत्र दिइएको छ, जसले निरोगी, जवान एवं तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्छ । भलै यी सूत्र सामान्य र आधारभूत लाग्न सक्छ । यद्यपि दीर्घ जीवनका लागि यो एकदमै अपरिहार्य छ ।
१, जहिले पनि बाहिरबाट घर आएपछि कुनै पनि बस्तुलाई छुनु अघि,तथा खाना बनाउनु र खाना खानुअघि हातलाई सावुन पानीले मज्जाले धुनुपर्छ । घरमा साना बच्चाहरु छन भने यो झन जरुरी हुन्छ । बच्चालाई समात्नु अघि राम्रोसित हात धुनुपर्छ वा सेनेटाइजर प्रयोग गरौं ।
२, घरको सफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी भान्सा तथा शौचालय सफा हुनुपर्छ । पानी जम्न दिनु हुँदैन । सिंक,वास बेसिन आदि ठाउँहरु नियमित रुपमा सफा गरौं । फिनेल,फ्लोर क्लिनर आदिको उपयोग गरौं ।
३, ताजा तरकारी तथा फलफूलहरु सेवन गरौं । उपयोगमा आउने मसला, अन्न तथा अन्य सामग्रीको भण्डार पनि सही तरिकाबाट गर्नुपर्छ । एक्सपायर डेट भएका वस्तुहरुको मितिलाई ध्यानमा राखौं । यसका अलावा खाने कुरालाई कहिल्यैं पनि खुल्ला छाड्न हुँदैन् । काँचो तथा पाकेको खानालाई अलग अलग राखौं । खाना पकाउन तथा खानका लागि उपयोगमा आउने भाँडाकुडा, फ्रीज, ओभन आदिलाई राम्ररी सफा गरौं । चिसो भाँडालाई कहिले पनि ¥याकमा नराखौं । साथै राम्ररी नसुकेका डिब्बाहरुलाई बिर्को लगाएर नराखौं ।
४, अत्यधिक तेल, मसलाबाट बनेको खानेकुरा नखाने । खानालाई सही तापक्रममा पकाउनुपर्छ । बढि पकाएर तरकारीको पौष्टिक तत्व नष्ट नगरौं । साथै ओभनको प्रयोग गर्दा तापमानको विशेष ध्यान राख्नुपर्छ । सँधै ताजा भोजन खानुपर्छ ।
५, खानामा सलाद, दही, दूध, हरियो तरकारी, दाल, गेडागुडी आदिका प्रयोग गरौं । खानामा जति धेरै विविधता भयो त्यति नै राम्रो । खाना पकाउन तथा पिउनका लागि सफा पानीको उपयोग गरौं । तरकारी तथा फलफूललाई राम्ररी धोएर मात्रै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
६, खाना पकाउनका लागि सोयाविन, सनफलावर र जैतुनको तेललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खानामा चिनी तथा नून दुबैको कमभन्दा कम प्रयोग गरौं । जंगफुड, सफ्ट ड्रिंक तथा आर्टिफिसियल चिनीबाट बनेको जूस आदिको उपयोग नगरौं । राति सकभर हल्का,फूल्का खाना खानुपर्छ । सुत्नु भन्दा अगाडि १५ र २० मिनेट घुमफिर गर्नु राम्रो हुन्छ ।
७, आफ्नो विश्राम गर्ने तथा सुत्ने कोठालाई सफा सुग्घर, हावादार तथा खुल्ला राखौं । तन्ना,तकियाको खोल र पर्दालाई नियमित रुपमा फेर्ने गरौं ।
८, मेडिटेसन,योगा तथा ध्यानको प्रयोग एकाग्रता बढाउन तथा तनावबाट टाढा रहनका लागि आवश्यक छ । त्यसैले बिहानको समयमा यसका लागि समय निकाल्नु पर्छ । बिहान चाँडै उठ्नुस र खुल्ला हावामा व्यायाम अथवा योगा गरौं ।
९, दैनिक कुनै एक व्यायाम गरौं । यसका लागि कमसेकम आधा घन्टा समय दिनुपर्छ र व्यायामको तरिका बदल्नुपर्छ
१०, ४५ वर्ष उमेर काटेकाहरुले आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्छ । डाक्टरले दिएको औषधि नियमि रुपमा सेवन गरौं । प्रकृतिसँग नजिक रहने समय निकालौ । बच्चाहरुसँग खेल्नुस र परिवारसँग हल्काफुल्का मनोरञ्जनका लागि पनि समय निकाल्नुपर्छ । आफूलाई धेरै सिरियस नबनाउने र रिसलाई आफू माथि हावी हुन नदिने गर्नु पर्दछ ।
Nextमाटो परिक्षण मेसिन अलपत्र अवस्थामा